Tinobetsera Vanhu, Makambani uye Masangano kuti vaone zvisingaiti. Sei?
Neko Kudzidzisa zvidzidzo zvinotarisirwa kudzidzisa mafungiro ekufungidzira kuti aone zvisingaiti muupenyu hwezuva nezuva. Kana kubudisa zviitiko zvinonakidza, zvinoshamisa zvisingagoni kuitika kwauri.
Masters eMichindwa inoita zvirongwa zvakanakisisa zvinoratidzirwa, kuratidzira zvinodiwa nevatengi vekukurukurirana. Iyo chiratidzo inova nzira yekuendesa mharidzo uye artisti, mutauriri wekukurukurirana.
Manzwiro anowirirana nemufananidzo wega wega.
Kumanzwiro ose kunokosha kwechiratidzo.
Kuita zvisingaitiki zvinogona kuitwa. Uye Masters eMichindo anodzidzisa nzira yekuzviita. Kunotangwa kubva dziva chikwata ne chiremba wepfungwa Matthew Rampin, Funga Strange® Philosophy, ane simba chawo nesayenzi kuti anoda mashoko edzidzo chaaitaura kuburikidza zvechokwadi nguva zvekuratidza, kuna hoc pamusoro vatengi zvinodiwa.
Masters zvemashiripiti akaita rakagadzirirwa, yakabereka uye akaona zvose zvikuru mashiripiti zvirongwa aired muItaly musi Rai, Mediaset uye Sky ichangopfuura years.The 10 Masters zvemashiripiti zvirongwa vagara vakapfuura mugove network, achisimbisa kubudirira uzivi kwayo : kuvandudza mamiriyoni emashiripiti ekugadzira zviratidzo zvakasiyana-siyana. Mhinduro huru kubva kuvanhu inoratidza kuti kana magetsi ari nani, inotyisa uye inofadza.
KUDZIDZISA - pfungwa coaching live show - Shanduko isimba
Zvinopfuura 1 Billion yemavhidhiyo ekuratidzwa kwemhando yakasiyana yekuratidza ...
ZVINHU ZVINOKUDZERA - Big Show
The World Magic Championship, iyo yakagadziriswa mubayiro wepasi rose neyanyanzvi Magicians of ...
IULM - Gore rezvidzidzo rinotanga
Walter Rolfo, simba rekubudirira mukudzidzisa mumakore ekupedzisira e6, akanga ...
DZIDZIDZO - Keynote kutaura
RIVA DEL SOLE - Chirwere
3 matarenda anoshamisa echiItaly zvekuratidzira kubva padanho pakati peroto uye uroyi
ZVINHU ZVIRI KUITIKA - Company Events
Zvinogoneka ... kusika manheru umo bhizimusi rekambani rekambani ndiro rinokosha ku ...
MAW - Unconventional usiku
Zvinogoneka ... kuti ivhare mukati manheru uye mune imwe hurukuro iyo excellence ye ...
RARIDZA ZVISINOKOSHA NESU
Wakanganwa zita remutauro?
Famba nzvimbo yakachengetedzwa kuti uwane zvatinotengeserana